Ahoana ny fomba hanararaotana amin'ny fomba feno ny Twitter amin'ny hetsika manaraka | Martech Zone
Ahoana ny fomba fampiasana Twitter amin'ny fomba feno amin'ny hetsika manaraka
Alarobia, Desambra 3, 2014 Alarobia, Desambra 3, 2014 Douglas Karr
Iray amin'ireo Chat ao amin'ny Twitter izay tena tianay ny mandray anjara amin'izany Atomic Reach's #AtomicChat. Resaka novina tsara sy voarindra mialoha momba ny lohahevitra marketing isan-karazany ao amin'ny Twitter izay mitranga isaky ny Alatsinainy amin'ny 9PM EST. Isaky ny mandray anjara aho dia talanjona foana amin'ny maha-lavorary ny Twitter ho mpanelanelana an'ity hetsika ity.
Tsy izaho irery no mino fa tsara ho an'ny hetsika ny Twitter. Julius Solaris, mpanoratra an'ny Media sosialy ho an'ny hetsika (ebook maimaimpoana!) mino fa mahafinaritra ihany koa izany ary natambany ity fampahalalana vaovao ity amin'ny fomba fampiasana Twitter tsara indrindra raha toa ianao ka hetsika matihanina. Ireo matihanina amin'ny hetsika dia mampiasa Twitter ho an'ny seminera, lanonana fanomezana, fanombohana vokatra, fivoriambe, fihaonambe, hetsika ara-panatanjahantena, fampirantiana, fety ary fampirantiana.
Twitter dia fitaovana matanjaka ho an'ireo matihanina amin'ny hetsika. Ity infographic ity dia hanampy anao hampiasa Twitter amin'ny fomba mahomby amin'ny marketing amin'ny hetsika, PR, serivisy ho an'ny mpanjifa, fikarohana ary varotra. Julius Solaris, Mpanoratra ny Media sosialy ho an'ny hetsika.
Ny infographic dia manome torohevitra tsara momba ny fomba fampiasana Twitter amin'ny fomba mahomby amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa hetsika, fivarotana ny hetsikao, fitantanana ny lazan'ny hetsikao, fahazoana hevi-baovao, fanampiana amin'ny varotra, fandraisana anjara mandritra ny hetsika ary fahazoana valin-kevitra momba ny hetsika. Heveriko ihany koa fa haino aman-jery mahafinaritra ho an'ny fizahana mivantana ny zava-mitranga amin'ity hetsika ity! Manome statistika ihany koa ilay infographic (69% amin'ireo Event Planners no mampiasa Twitter amin'ny hetsika ataon'izy ireo!) Ary torohevitra tsara ho an'ny etika sy fanao tsara indrindra amin'ny Twitter.
Aza hadino ny mamaky ny ebook maimaim-poana an'i Julius amin'ny Media sosialy ho an'ny hetsika!
Tags: lanonana fankalazanafihaonambefampiroboroboana ny fihaonambefivoriambehetsikafampiratiana hetsikatenifototra hetsikafitantanana hetsikafampiroboroboana ny hetsikafampirantianafetybitsika mivantanaKonferansa momba ny marketingfandefasana vokatraseminerahetsika ara-tsosialyhetsika ara-panatanjahantenaFampisehoanaTwitteretikety ao amin'ny twitterfandraisana an-tanana webinarfampiroboroboana webinar
Ireo paikady mahomby indrindra manerana ny Facebook, Twitter, Pinterest ary LinkedIn